Galaxy Z Fold2: nkọwa nke ọhụụ ọhụụ ọhụụ sitere na Samsung | Gam akporosis
Galaxy Z Fold2: nkọwa nke Samsung ọhụrụ mpịachi ama
Dika emere ọgbọ mbu nke Samsung Galaxy Fold, anyị amalitela ikwu maka ọgbọ nke abụọ, ọgbọ nke abụọ mgbe ọtụtụ ọnwa nke asịrị, ịkọ nkọ na ndị ọzọ mechara bụrụ ọkwa. Samsung ejiriwo ihe ngosi ihe ngosi nke Galaxy Note 20 iji gosipụta ya Galaxy Z Fold2, ọgbọ nke abụọ na-abịa na ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ.
Oge mbu nke Samsung Galaxy Fold chere ọtụtụ nsogbu ihu, ọbụna tupu ị rute ahịa site na nyocha nke mgbasa ozi ndị nwere ohere ịnwale ya, ịbụ onye nchebe ihuenyo, otu n'ime nsogbu ndị bụ isi na ya. Nke a mere ka ụlọ ọrụ ahụ gbuo oge maka mbido ya wee melite nchekwa ahụ.
2 Nnukwu ime ụlọ
3 Ọtụtụ ihuenyo eji eme ihe karịa
4 Igwe foto iji chebe oge ọ bụla
5 Usoro mgbadoro emelitere
6 Enweghị ebe maka S-Pen
7 Ọtụtụ ndozi jiri ya tụnyere ọgbọ mbụ
8 Nnweta na ọnụahịa nke Galaxy Z Flip2
Usoro njikwa Achịcha 9 Pee na Otu UI A gam akporo 10 nwere otu UI 2.5
Ime ụlọ 4.6 nke anụ ọhịa ahụ HD + Super AMOLED (21: 9) 6.2 nke anụ ọhịa ahụ Full HD
Ihuenyo mpụga 7.3-inch Infinity Flex QXGA + Dynamic AMOLED Infinity 7.6-inch-O QXGA + Dynamic AMOLED FullHD +
Nhazi Exynos 9820 / Snapdragon 855 Snapdragon 865 +
Nchekwa n'ime 512 GB UFS 3.0 512 GB UFS 3.0
Igwefoto na-aga n'ihu 16 MP f / 2.2 ultra-wide angle 12 MP Dual Pixel wide-angle na agbanwe oghere f / 1.5-f / 2.4 na ngwa anya oyiyi stabilizer + 12 MP telephoto oghere na abụọ-magnification mbugharị ngwa anya na f / 2.2 aperture Isi ihe 64 MP nwere oghere f / 1.8 - oghere MP telephoto 12 MP na ngwa anya na-eme ka f / 2.4 aperture na 2x bia - 16 MP obosara akụkụ na f / 2.2 aperture
Igwefoto Igwe N'ime 10 MP f / 2.2. + 8 MP f / 1.9 omimi ihe mmetụta 10 MP nwere oghere f / 2.2
Igwefoto N'ihu Mpụga 10 MP f / 2.2 10 MP f / 2.2.
Njikọ Bluetooth 5.0 A-GPS GLONASS WiFi 802.11 ac USB-C 3.1 5G - Bluetooth 5.1 A-GPS GLONASS Wifi 802.11 ac USB-C 3.1
Atụmatụ ndị ọzọ Akụkụ mkpisiaka agụ - NFC Akụkụ mkpisiaka agụ - NFC
Batrị 4.380 mAh 4.356 mAh dakọtara na ngwa ngwa ịkwụ ụgwọ ruo 15W
Akụkụ 156.8 × 74.5 × 8.67mm
Ibu ibu 200 grams 179 grams
Ahịa 1980 dollar -2020 euro Kpebisiri ike
Nnukwu ime ụlọ
Galaxy anọ 1
Ngosipụta dị n'ime nke Z Fold 2 ewepụla ọkwa nke ọgbọ mbụ. Samsung ahọrọla imewe atụmatụ Infinity-O, nwere oghere n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ebe igwefoto dị n'ihu. Nke a mere ka Samsung gbasaa ogo nke ihuenyo wee si otú ahụ belata mbadamba, yabụ na ọgbọ ọhụrụ a, ihuenyo dị n'ime site na 7,3 sentimita ruo 7,6.
Nke a ọhụrụ ngosipụta ime, na-enye anyị ume ume nke 120 Hz, ọnụ ọgụgụ ume ọhụrụ dị elu nke ghọworo ihe a na-ahụkarị n'etiti ekwentị kachasị elu, ọ bụ ezie na a ka nwere ndị nrụpụta na-etinyebeghị ya, dịka ọ dị na Apple. Nmeghari ume a ga-adaba na ngwa anyị ji eme ihe ka batrị ghara ịpụpụ ngwa ngwa. Ihuenyo, mpịakọta nke 6,3, na-enye anyị ume ume nke 60 Hz.
Ihuenyo a na-ekpuchi ihe Samsung kpọrọ Ultra Thin Glass, nchebe na-eguzogide ọgwụ na plastik eji mee ihe na nke mbụ na nke ahụ adịlarịrị na Galaxy Z Flip na ụlọ ọrụ ahụ malitere tupu afọ a.
Ọtụtụ ihuenyo eji eme ihe karịa
Ihuenyo nke mputa nke ọgbọ mbu nke Galaxy Fold dị ka ihe ọchị. Ọ baghị uru na ọ bụ naanị 4,6 sentimita, ebe ọ na-akpọghị ka ị jiri ekwentị na ihuenyo mpụga. Site na Samsung ha enweela ike idozi nsogbu a na ọgbọ nke abụọ, amụbawo nha ihuenyo ahụ ruo sentimita 6,2, ịgbanye ihuenyo dị na mpụga n'ime ama zuru oke, nke ga-enye gị ohere iji ama na ọtụtụ oge na-enweghị imeghe ya.
Igwe foto iji chebe oge ọ bụla
Ọgbọ nke mbụ nke Fold, nyere anyị igwefoto igwefoto ebe Flash jikọtara ya na kamera niile nwere mkpebi nke 12 MP.
Site na ọgbọ nke abụọ a, Samsung etinyegoro ya otu modul igwefoto dị ka Rịba ama 20, modul nke na-ejikọta ọkụ n'akụkụ igwefoto mbụ yana n'ime otu setịpụrụ. Na mgbakwunye, ọ gbasaa mkpebi nke lens telephoto na 64 MP.
Usoro mgbadoro emelitere
Z Z Fold 2 na-eme otu ihe ahụ anyị nwere ike ịchọta na Galaxy Z Flip, nke na-enye anyị ohere iji ekwentị ahụ mepee ọkara, na-etinye ya na tebụl ma ọ bụ dị larịị iji mee oku vidiyo, foto abalị, oge-oge ...
Enweghị ebe maka S-Pen
Agbanyeghị na asịrị ụfọdụ tụrụ aro na Samsung nwere ike ịgbakwunye S-Pen na ọgbọ nke abụọ a, n'ihi na ihe eji eme ya esighi ikeSamsung kpebiri ichere maka ọgbọ ndị na-abịa abịa, mgbe ihe eji emepụta ihe na ihuenyo nyere ya ohere ịnye otu ahụmịhe dị ka ama dị na Nkọwa. Amaara m mkpebi ahụ, ebe ọ bụ na ị ga-enye ọkara ma ọ bụ nkwado akwadoghị nke ọma, ọ ka mma ịhapụ ya maka nsụgharị ndị dị n'ihu.
Ọtụtụ ndozi jiri ya tụnyere ọgbọ mbụ
Samsung amatala n'oge ihe omume ahụ ọ bụghị naanị mee ka isi ihe ndị kachasị ike nke ọgbọ mbụ ka mma, kamakwa, ọ heedara ntị na aro ndị ọ natara ma site na ndị nta akụkọ ma site n'aka ndị ọrụ, ihu mputa bụ ihe kachasị ama.
Dịka anyị pụrụ ịhụ, Samsung agbanweela aha ọgbọ nke abụọ a site na ịgbakwunye Z n'etiti Galaxy na Fold, maka nke a tinye ya n'ime udi nke mpịachi ekwentị nke ụlọ ọrụ Korea, otu ụdị nke nwere 2 ọnụ na katalọgụ ya.
Ibu nke ọgbọ nke abụọ a Ọ si na gram 200 gaa gram 179 nke Z Fold2. Otu ihe atụ nke ọmarịcha ọrụ nke Samsung rụrụ na ọgbọ nke abụọ a, ebe, na mgbakwunye, mpịachi ihuenyo pere mpe karịa nke mbụ.
Nnweta na ọnụahịa nke Galaxy Z Flip2
Samsung ekwuputaghi ọkwa mmeghe nke ọgbọ ọhụrụ a nke Galaxy Fold, ma kpọọ anyị ka anyị bido na ọnwa Septemba iji mara ọnụahịa ọ ga-enwe, ụgwọ nke dịka ụfọdụ asịrị si kwuo, nwere ike ịdị elu karịa ọgbọ mbụ, ihe m na-enyo enyo otutu, ebe o gha adi ka igba onwe gi ukwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Galaxy Z Fold2: nkọwa nke Samsung ọhụrụ mpịachi ama
Galaxy Tab S7 na S7 +: nkọwa na ọnụahịa